မြန်မာနိုင်ငံ ရေဆေးပန်းချီအသင်းမှ (၁၅) ကြိမ်မြောက် ရေဆေးပန်းချီ ရန်ပုံငွေပြပွဲကို ကျုံးတော? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံ ရေဆေးပန်းချီအသင်းမှ (၁၅) ကြိမ်မြောက် ရေဆေးပန်းချီ ရန်ပုံငွေပြပွဲကို ကျုံးတော?
မြန်မာနိုင်ငံ ရေဆေးပန်းချီအသင်းမှ (၁၅)ကြိမ် မြောက် ရေဆေးပန်းချီရန်ပုံငွေပြပွဲကို ဧပြီ ၃ဝ ရက် ညနေ ၃ နာရီခွဲ ခန့်က မန္တလေးနန်းမြို့ကျုံးတောင် ဘက်ခြမ်းဖြစ်သော အများပြည်သူ အပန်းဖြေသွားလာလျက်ရှိသည့် လူထုနေရာဖြစ်သော ၂၆ လမ်းနှင့် ၆၆ လမ်းထောင့် ပလက်ဖောင်း ပေါ်၌ ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
‘အများပြည်သူသွားလာတဲ့ နေရာမှာ စည်ပင်သာယာကနေ ပြီးတော့ အနုပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စ တွေခွင့်ပြုမယ်လို့ သတင်းစာထဲက နေတွေ့ရတော့ ဆရာတို့အသင်း အနေနဲ့ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ပန်းချီပညာနဲ့ ပြည်သူတွေ ပိုပြီးနီးစပ်စွာနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ရတယ်။ ပန်းချီပညာ ရဲ့ရသကို အပန်းဖြေရင်းကြည့်ရှုရမယ့်ပြပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာမှာပါ”ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရေဆေးပန်းချီအသင်း နာယက ပန်းချီဒေါက်တာ ဦးကို ကိုကြီးက ပြောသည်။ အဆိုပါပြပွဲတွင် ရေဆေးပန်း ချီကားပေါင်း ၈ဝ ခန့်ချိတ်ဆွဲပြသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပန်းချီကားဈေးနှုန်းများ မှာ လေးချိုးဆိုက်တစ်ကားလျှင် ကျပ် ၁ဝဝဝဝ မှ ကျပ် ၈ဝဝဝဝ အထိရောင်းချမည်ဖြစ်ကာ ယခု ပြပွဲတွင် လက်တွေ့ပန်းချီရေးဆွဲ ခြင်းအစီအစဉ်ပါဝင်ရာ ပုံတူပန်းချီ၊ ရှုခင်းပန်းချီနှင့် ကယ်ရီကေးချား ရေးဆွဲခြင်းအတွက် တစ်ပုံလျှင် ကျပ် ၅ဝဝဝ မှ ကျပ် ၁ဝဝဝဝ ဖြင့် ရေးဆွဲပေးမည်ဖြစ်သည်။
”အများပြည်သူ ဝယ်ယူနိုင် မယ့်ဈေးနှုန်းနဲ့ပဲရောင်းချသွားမှာပါ။ လက်တွေ့ပန်းချီရေးဆွဲတဲ့ အစီ အစဉ်တွေလည်းပါမယ်။ ရှုခင်း ပန်းချီ၊ ကယ်ရီကေးချားပုံတူ ရေး ဆွဲတာတွေထည့်ထားတယ်။ ဒါက ဆရာတို့အသင်းရန်ပုံငွေ အနေနဲ့ ထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဆရာဦးဇော်ဝင်း(သစ်ထွင်း)က ပြောသည်။ အဆိုပါ ရေဆေးပန်းချီပြပွဲ မှာ (၁၅)ကြိမ်မြောက် အသင်းလှုပ် ရှားမှုပြပွဲအဖြစ် ပြသခြင်းဖြစ်ပြီး ပြပွဲကို ဧပြီ ၃ဝ ရက်မှ မေ ၃ ရက် အထိ ကျင်းပသွားမည်။
ဒေးဗစ်လုဇ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိဟု ချဲလ်ဆီးနည်းပြကွန်တီ ဆို